Kala duwanaanta dhaqanka ee Kanada | Safarka Absolut
La kala duwanaanta dhaqanka ee Kanada Waa mid ka mid ah astaamaha ugu caansan uguna caansan bulshada dalkan. Si aan micne lahayn looma dhamayn dhamaadka tobanka sano ee 70meeyadii qarankani wuxuu qaatay calanka dhaqammada badan, noqoshada mid ka mid ah gobolada ugu kor u qaaday socdaalka.
Kala duwanaanshahaani waa natiijada dhaqammada kala duwan ee diinta iyo saameynta dhaqameed ee, waddan muhaajiriin ah laga soo bilaabo dhalashadiisii, uu qaabeeyey aqoonsiga Kanadiyaanka.
1 Dadka asaliga ah ee Kanada
2 Labada nafood ee Kanada: Ingiriiska iyo Faransiiska
3 Socdaalka iyo kala duwanaanta dhaqanka
4 Amaan iyo dhaliil
5 Kala duwanaanta dhaqanka ee Kanada tirooyin ahaan
Dadka asaliga ah ee Kanada
ka dadka asaliga ah ee Kanada, oo loo yaqaan "ummaddihii ugu horreeyay" waxay ka kooban yihiin in ka badan 600 qowmiyadeed oo ku hadla illaa 60 luqadood. Sharciga Dastuuriga ah ee 1982 wuxuu dadkan u kala saaraa saddex qaybood oo waaweyn: Hindida, Inuit iyo Métis.
Dadka asaliga ah ee reer Kanada ("First Nations") maanta waxay gaarayaan ilaa 5% tirada guud ee dadka wadanka.
Waxaa lagu qiyaasaa in dadka asaliga ah ay qiyaastii yihiin 1.500.000 oo qof, taas oo ah, qiyaastii 5% guud ahaan dalka. In ka badan kala badh waxay ku nool yihiin bulshooyin miyi ama keyd gooni ah.
Labada nafood ee Kanada: Ingiriiska iyo Faransiiska
Horeba qarnigii toddoba iyo tobnaad dhulalka hadda ka tirsan Kanada waxaa sahamiyay oo gumaystay ingiriis iyo faransiis, in aagaggooda falgalka saamaynta lagu qaybiyey. Joogitaanka reer Yurub ee dalalkan ayaa kordhay dhammaan qarnigii XNUMXaad iyada oo loo marayo hirarka hijrada waaweyn.
Ka dib markii ay xornimada qaateen 1867, dowladihii hore ee Kanada waxay dejiyeen siyaasad cadaawadeed oo ku wajahan dadka asaliga ah taas oo markii dambe lagu tilmaamay "Ethnocide." Sidaa darteed, culeyska dadka ee magaalooyinkan si weyn ayaa loo yareeyay.
Quebec (Kanada ku hadasha Faransiiska) waxaa jira dareen qaran oo xoog leh
Ficil ahaan illaa nus qarni kahor inta badan dadka reer Kanada waxay kamid ahaayeen labada koox ee ugu waaweyn Yurub: Faransiis (juquraafi ahaan waxay ku urursan tahay gobolka Quebec) iyo Ingiriis. Saldhigyada dhaqanka ee dalku waxay ku saleysan yihiin labadan jinsiyadood.
Qiyaastii 60% dadka Kanadiyaanka ah waxay af Ingiriisiga u yihiin afkooda hooyo, halka Faransiiskuna yahay 25%.
Socdaalka iyo kala duwanaanta dhaqanka
Laga bilaabo 60-yadii, sharciyada socdaalka iyo xaddidaadaha doorbiday socdaalka Yurub iyo Mareykanka ayaa wax laga beddelay. Tani waxay keentay daadad muhaajiriin ah oo ka yimid Afrika, Aasiya iyo gobolka Kariibiyaanka.
Heerka socdaalka Kanada wuxuu hadda yahay midka ugu sarreeya adduunka. Tan waxaa lagu sharaxay caafimaadka wanaagsan ee dhaqaalaheeda (taas oo u dhaqmeysa sida sheegashada dadka ka yimid wadamada saboolka ah) iyo siyaasadeeda mideynta qoysaska. Dhinaca kale, Kanada sidoo kale waxay ka mid tahay gobollada galbeedka ee martigaliya qaxootiga ugu badan.
Tirakoobka 2016, ilaa 34 qowmiyado kala duwan ayaa ka muuqda dalka. Kuwaas, tobanaan ka badan milyan qof. Kala duwanaanta dhaqameed ee Kanada waxay u badan tahay tan ugu weyn meeraha oo dhan.
Aqoonsiga Kanada ee waddan dhaqammo badan leh waxaa lagu qoray 1998 Sharciga dhaqamada kala-duwan ee Kanada. Sharcigani wuxuu ku qasbayaa dawladda Kanada inay hubiso in dhammaan muwaadiniinteeda loola dhaqmo si siman gobolka, taas oo ay tahay inay ixtiraamto oo u dabaaldegto kala duwanaanta. Waxyaabaha kale, sharcigan wuxuu aqoonsan yahay xuquuqda dadyowga asaliga ah wuxuuna difaacayaa sinnaanta iyo xuquuqda dadka iyadoo aan loo eegin jinsiyad, midab, abtirsiin, dhalasho ama asal asal ahaan, caqiido ama diin.
27 Juun kasta, waddanku wuxuu u dabaaldegaa Maalinta dhaqamada badan.
Amaan iyo dhaliil
Kala duwanaanshaha dhaqameed ee Kanada ayaa maanta calaamad u ah aqoonsiga dalkan. Waa la tixgeliyaa tusaalaha ugu fiican ee bulsho kala duwan, dulqaad iyo furfurnaan. Soo dhaweynta iyo isdhexgalka dadka ka yimid wadanka ku dhowaad dhammaan qaybaha adduunka ayaa ah guul si weyn loogu majeerto ka baxsan xuduudaheeda.
Si kastaba ha noqotee, ballanqaadkii go'aanka ahaa ee dowladihii is xigxigay ee Kanada ee ku saabsan dhaqammada kala duwan ayaa sidoo kale ahaa shayga adag dib u eegis. Kuwa ugu daran ayaa si sax ah uga yimaada qaybaha bulshada Kanada lafteeda, gaar ahaan gobolka Québec.
Muusikada dhaqanka ee Kanada
Dhaleeceeyayaashu waxay ku doodayaan in dhaqammada kaladuwan ay dhiirrigelinayaan abuuritaanka geutos waxayna ku dhiirrigelinayaan xubnaha qowmiyadaha kala duwan inay gudaha wax ka eegaan oo ay xoogga saaraan khilaafaadka u dhexeeya kooxaha halkii ay ka adkayn lahaayeen xuquuqdooda la wadaago ama aqoonsigooda muwaaddiniinta Kanada.
Kala duwanaanta dhaqanka ee Kanada tirooyin ahaan
Tirakoobyada ay si joogto ah u daabacdo dowladda Kanada ayaa ka tarjumaya runta kala duwanaanshaha dhaqameed ee dalka. Waa kuwan qaar ka mid ah kuwa ugu muhiimsan:
Tirada Dadka Kanada (38 Milyan 2021) Waxaa Qoray:
Hindida Mareykanka 4,9%
Luqadaha looga hadlo Kanada:
Ingiriisi 56% (luqadda rasmiga ah)
Faransiiska 22% (luqadda rasmiga ah)
Masiixiga 67,2% (in kabadan kalabar Masiixiyiinta Kanadiyaanka waa Katoolig halka shan meelood meelna ay yihiin Protestant)
Kuwa kale 0,6%
Qiyaastii 24% dadka Kanadiyaanku waxay isku qeexaan inay yihiin diin laaweyaal ama waxay caddeeyeen inaysan raacin diin kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Kala duwanaanta dhaqanka ee Kanada
Cumbia, laxanka dhaqameed ee Kolombiya